Faah faahin:- Qarax caawa ka dhacay degmada Hodon ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax caawa ka dhacay degmada Hodon ee magaalada Muqdisho
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax aad u xoogan oo caawa ka dhacay wadada Taleex, gaar ahaan agagaarka xarunta laga maamulo degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Qaraxaasi oo ay kasoo baxayaan warar kala duwan ayaa la sheegayaa inuu ahaa miino dhulka lagu aasay, halka warar kale ay sheegayaan inuu ahaa gaari walxaha qarxa ay saaran yihiin oo lagu dhuftay gaari kale uu la socday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamuud Abuukaate.
Inta la xaqiijiyay illaa 4 qof oo uu ku jiro xildhibaanka ayaa qaraxaasi ku dhaawacantay, waxaana goobta uu qaraxa ka dhacay daqiiqado kadib soo gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan ah mid aad u kacsan, waxaana haatan goobtaasi soo gaaray ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo howlgalo baaritaano ah halkaasi ka bilaabay.
Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxaasi, iyadoona inta badan qaraxyadda ceynkaan oo kale ay magaalada Muqdisho ka geystaan Xarakada Al-shabaab.